IJumia (JMIA) yoVimba
Udidi: IJumia (JMIA)
IJumia ukuthengwa kwexesha elide njengokumkani wokukhula kweAfrika
I-e-commerce egxile e-Afrika yokudlala iJumia Technologies (JMIA) isitokhwe siphumile emva kokubhengeza ukubetha kwiziphumo ze-3Q 2020 ukubuyela ngo-Novemba, ngaphandle kokuwa kwe-18% kwingeniso.
Emva kwetyala elinamatye njengenkampani kawonke-wonke ngo-Epreli 2019, xa ixabiso liye laxhuma kwi-IPO kuphela ukubuyela emva kwexabiso le-IPO le- $ 14.50 ngoJulayi 2019 kwaye ukubuyisa kuphela inqanaba ngo-Agasti wonyaka ophelileyo.
Ixabiso leJumia IPO yayiyi- $ 14.50
Iziphumo ze-3Q zilandele ukuphuma kakubi kwiziphumo zekota edlulileyo, okukhokelele ekuweni kwexabiso lesabelo, nangona iziphumo ezimangalisayo zokufumana isabelo ngasinye kwiziphumo ze-Q1 ezichazwe ngoMeyi zibeke ixabiso lesabelo kwi-trajectory ephezulu ngaphambi koko.
Kwingxelo yayo ye-Q2, ikwanciphisile ukulahleka kwayo kwe-EBITDA, kwikota yesibini ngokulandelelana kwaye abasebenzisi bayo abasebenzayo bakhule nge-14%. Nangona kunjalo, kweso sihlandlo-nge-Agasti 2020-isitokhwe sehle ngama-30%
UJumia uxhamle kwimpembelelo yobhubhane kodwa akukho ndawo ikufutshane kakhulu njengoko ibonwa kwiimarike eziphuhlileyo ngenxa yokunqongophala kwezinto kwilizwekazi.
Oku kunceda ukucacisa i-Q3 yengeniso ethambileyo kodwa ukunciphisa iindleko kukhokelele kuphuculo kumgca osezantsi kunye nelahleko ye-EBITDA enxulumene nokuncipha ukusuka kwi- € 49 yezigidi ukuya kwi- € 32.4 yezigidi (i-38.3 yezigidi zeedola).
Iziphumo zikaJumia zichaphazelekile kwicala lokufumana imali ngokutshintsha kwayo ukuya kuthengisa inani eliphezulu lezinto ezingabizi kakhulu kodwa ezithengwa rhoqo.
UJumia wenza 'inkqubela phambili elungileyo' kwikamva elinenzuzo
Kungekudala emva kokuya esidlangalaleni, iJumia yabethwa ngamarhe obuqhetseba kwimisebenzi yayo yaseNigeria, ethi, njengoko unokucinga, yenze abatyali zimali, kodwa loo marhe angqineke engenasihlahla.
Ngaphandle koko, imali engenayo iyonke ibonisa "inkqubela phambili elungileyo", ngokuka-mphathi omkhulu kunye nomseki-kunye (noJeremy Hodara) Sasha Poignonnec.
Indlela yenkampani yenzuzo ixhomekeke kwithemba eliqinisekileyo lokukhula kwilizwekazi, apho utyalomali lwangaphakathi ngokuthe ngqo lukhule ngesantya esizinzileyo kunye nenqanaba labakumgangatho ophakathi liyadumba.
Ngokwengcebiso kaMcKinsey, i-e-commerce iya kuba nenani le-10% yazo zonke izinto ezithengiswayo (i-75 yezigidigidi zeedola) ngo-2025, njengokungena kwe-intanethi ngesantya esiphathwayo.
Eyasungulwa ngo-2012, inkampani yaseJamani ngoku isebenza kumazwe angama-23 aseAfrika.
Abanye abahlalutyi bakhuthaze iJumia ukuba ibambisane nabadlali abakhulu abanjengoAmazon okanye iAlibaba, kodwa endaweni yoko ijonge ukwandisa kwizivumelwano ezenziwa ziimpawu zalapha ekhaya njengoko ikhulisa ishishini.
Umzekelo, iivenkile zokutyela zijolise ikakhulu kulwandiso, ukuhanjiswa kokutya kubonakala kuyanda kodwa kunentsebenziswano kwintengiso kunye ne-US Big Tech ngohlobo lobudlelwane bokuthengisa kunye noFacebook noGoogle.
IJumia Pay kunye nokusebenza kwempahla ukuqhubela phambili amaxabiso ezabelo ngaphezulu
IJumia ikwanokuhlangana kunye namaqabane eentlawulo anje ngeMastercard- kutyalo-mali lwe- $ 50 yezigidi ezenziwe kwiminyaka emibini edlulileyo- kunye neebhanki zalapha ekhaya, njengoko zibeka umnikelo wazo weJumia Pay.
IJumia Pay yimveliso enobungqongqo, enoluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha ukuzenza kunye neswitch yomsebenzisi-enobuchule besikhombisi sedigital interface esinceda ukuba siphume phakathi kwesihlwele.
Esizikithini sesicwangciso-qhinga sokukhula kwayo kukomeleza ukusebenza kwayo, nto leyo inkampani efuna ukuyakha njengenkokeli kwintengiso kwilizwekazi apho iinkonzo zeposi kunye nokulungisa zinokungathembeki kwaphela. I-Poignonnec ithi "ithatha amanyathelo kwangoko ukuvula iqonga lolungiselelo kubantu besithathu".
UJumia waqala ukukhutshwa kwenkonzo yakhe yokuhanjiswa kweqela lesithathu ngo-Novemba kulo nyaka uphelileyo kwaye webe umngcelele wokuthandwa kweAmazon ngenxa yobudlelwane bayo bendawo, ethi yona iyenze eyona ndawo ye-e-commerce ithembekileyo e-Afrika.
Iimarike eziphambili zibandakanya iNigeria - apho ikomkhulu linenkampani, i-Egypt, uMzantsi Afrika kunye neGhana.
IJumia idwelise inkampani yeemfonomfono zoMzantsi Afrika iMTN Group phakathi kwabaxhasi bayo, kodwa ithengise isabelo sayo ngo-Okthobha ophelileyo nge-142 yezigidi zeedola njengenxalenye yesicwangciso sokwahlulwa ukuze kufezekiswe iphothifoliyo yayo.
Amagama aqhelekileyo okutyala imali asuka kubatyali mali basentshona abandakanya uBaillie Gifford, iqela lolawulo lotyalo-mali olusekwe e-Edinburgh eliqhayisa ngeyona mali inkulu yase-UK, iScottish Mortgage, phakathi kwezithuthi zayo.
UJumia ubethengisela amajelo anyukayo ukusukela ngoNovemba 2020
Ixabiso lesabelo sikaJumia lenyuke ngama-800% ukusukela kwangaphantsi kwe- $ 7 nge-23 kaSeptemba kunyaka ophelileyo kwaye iphucule i-57% yonyaka ukuza kuthi ga ngoku.
Ixabiso liyarhweba ngaphakathi kwitshaneli enyukayo kodwa indawo yokungena ekhuselekileyo yenzeka kwindawo ekudibana kuyo i-0.786 Fib kunye ne-22 kaJanuwari ephezulu yeedola ezingama-56 ezijikeleze ikhandlela leentsuku ezi-1 (jonga itshathi engentla).
Kodwa ngengeniso ye-Q4 ngenxa ye-24 kaFebhuwari abatyali mali abanokufuna ukulinda ixabiso elisezantsi elinokungafiki kwixesha elifutshane.
Isitokhwe sonyuke nge-4% kwiseshoni yanamhlanje kwi- $ 63.80 kodwa ngevolumu esezantsi.
IJumia kukuthengwa kwexesha elide.
Thenga iJumia ngaphandle kwekhomishini kwi-eToro
tags iAfrika, eCommerce, IJumia (JMIA), Nayijeriya